Dab xoog leh oo dhulka ku daray suuq shidaal oo ku taalay Muqdisho (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dab xoog leh oo dhulka ku daray suuq shidaal oo ku taalay Muqdisho (Sawirro)
Mareeg.com: Dab xoog leh geystay khasaare hantiyad ayaa maanta qabsaday suuq shidaal ku taal agagaarka Isgoyska Black Sea ee degmada Howl Wadaag ee Gobolka Banaadir.
Gaadiidka dab damiska ee goobolka Banaadir iyo shirkadda Hormuud Telecom ayaa gurmad u sameysay suuqa shidaal ee dabku qabsaday, waxaana markii dambe lagu guuleystay in la damiyo.
Guddoomiyaha degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir Axmed Nuur Cabdi Siyaad ayaa ka warbixiyay dabkaas xooggan ee maanta ka kacay xarumo lagu iibiyo shidaalka ee isgoyska Black Sea, gaar ahaan dhinaca degmada Holwadaag.
Axmed Nuur Cabdi Siyaad ayaa sheegay in la damiyay dabka, wuxuu xusay in damintiisa ay iska kaashadeen shirkadda Hormuud, maamulka gobolka Banaadir iyo ganacsatda.
Mas’uulka ayaa tilmaamay in aysan jirin khasaare naf oo ka dhashay dabka, balse wuxuu sheegay inay gubteen ilaa toddobo bakhaar oo lagu iibin jiray shidaalka.
Wuxuu xaqiijiyay inuu dabka ka billowday meel shaaha lagu iibiyo oo u dhow goobta shidaalka.
Axmed ayaa caddeeyay inay wadaan tirakoob lagu sameynayo khasaaraha hantiyeed ee uu dabka gaystay.